GRN SPORTS – Page3– GRNSports NEPAL
सकियो भलिबल, भारतलाई दुई स्वर्ण, नेपाललाई ऐतिहासिक रजत
काठमाडौं : १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको उद्घाटन अघि नै शुरु भएको भलिबल खेल मंगलवार भारतले दुई स्वर्ण जितेपछि सकिएको छ । मंगलवार महिला पुरुष दुवै फाइल भारतले जितेको हो ।
यस्तै घरेलु टोली नेपालले महिलातर्फ ऐतिहासिक रजत जित्दा पाकिस्तानले १ रजत र श्रीलंकाले २ कास्य जितेको छ ।
मंगलवार भएको पुरुषतर्फको फाइनलमा भारतले पहिलो सेट गुमाएपनि पुनरागमन गर्दै पाकिस्तानलाई ३-१ ले हराउदै स्वर्ण जितेको हो । यस्तै महिलातर्फ निकै प्रतिस्पर्धात्मक र र रोमाञ्चक खेलमा भारतले नेपाललाई ३-२ को सेटमा पराजित गरेको हो । पहिलो सेट भारतले २५-१७ ले सहजै जित्दै अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि नेपालले दोस्रो सेट २५-२३ र तेस्रो सेट २५-२१ ले जित्दै अग्रता बनायो। भारतले चौथो सेट २५-२० ले जित्दै खेल बराबरी गर्‍यो भने अन्तिम सेट १५-६ ले सहजै जितेर स्वर्ण जितेको हो । पुरुषतर्फ पनि भारतले पाकिस्तान विरुद्ध पहिलो सेट गुमाएर पनि पुनरागमन गर्दै लगातार तीन सेट जितेर खेल जित्यो।
नेपालको महिला टोलीले पहिलो पटक स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेपनि पूरा हुन सकेन। पहिलो सेट गुमाएपनि दोस्रो र तेस्रो सेट जितेको नेपालले अन्तिम दुई सेट गुमाएपछि रजतमा चित्त बुझाउनु परेको हो ।
स्वर्ण जित्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेपनि नेपाले महिला भलिबलमा ऐतिहासिक रजत जितेको छ। यसअघि तीन पटक सागमा महिला भलिबलमा कास्य जितेको नेपालले यस पटक भने दोस्रो हुादै रजत जितेको हो ।
प्रशिक्ष जगदिश भट्टले रजत पदक नि नेपालको इतिहास भएको बताए । ‘सबैको अपेक्षा अनुसार नतिजा ल्याउन नसक्दा म त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु। तैपनि हामीले रजत जितेर सागमा अर्को इतिहास बनाएका छौँ। नेपाललाई भलिबलमा रजत दिएका छौँ।’
भारत विरुद्रध णनीति बनाएपनि सानो गल्तीले चुकेको बताए । ‘हामीलाई सबैको साथ सहयोग थियो, सबैले स्वर्ण जित्नुपर्छ भनेका थिए । त्यसअनुसारको रणनीति बनाएर मैदानमा उत्रिएका थियौँ। चौथो सेटमा हामी जितको नजिक थियौ तर सानो गल्तीहरुले हार्न पुग्यौ । खेलमा ३—४ वटा सर्भिस र २—३ वटा सामान्य बललाई नलिनु नै हारको कारण बन्यो ‘भट्टल भने।
यस्तै कप्तान अरुणा भण्डारीले साग समग्रमा राम्रो भएको बताउँदै भारतसंग पनि टक्कर दिएर खेलेको बताइन् । ‘साना गल्तीले गर्दा अन्तिम सेट हार्‍यौँ । तर नेपालको र भारतको स्तर फरक छ। तैपनि हामीले टक्कर दियौँ। यदी यो टिमले निरन्तर प्रशिक्षण पायो भने हामी अर्को सागमा स्वर्ण जित्छौँ।’
कास्य पदकको लागि सोमवारै भएको महिला र पुरुष दुवैतर्फको खेलमा श्रीलंकाले बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो ।
मंसिर १५ मा उद्घाटन भएको १३औ सागको भलिबल खेलहरु मंसिर ११ देखि नै शुरु भएको थियो । जसमा भारतले दुई स्वर्ण नेपाल र पाकिस्तानले समान १ रजत तथा श्रीलंकाले दुई कास्य जित्यो । अब भलिबलकै अर्को विभा बीच भलिबल हुन बाँकी छ । पहिलो पटक समावेश बीच भलिबल पोखरामा हुनेछ।
Posted bynepalgovin December 3, 2019 Posted inSports, VolleyballTags:VOLLEYBALL WOMENSVOLLEYBALLLeaveacomment on सकियो भलिबल, भारतलाई दुई स्वर्ण, नेपाललाई ऐतिहासिक रजत
काठमाडौ : घरेलु मैदान अनी घरेलु दर्शको साथ । फुटबलमा दर्शकलाई १२औ खेलाडी दर्जा दिइन्छ अनी आफ्नै माटोमा खेल्नुको मज्जा छुट्टै हुन्छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको दशरथ रंगशालमा नेपालले मंगलवार भुटान विरुद्ध खेल्दै फुटबलमा पुनरागमन गर्‍यो । रंगशालमा फुटबल फर्कँदा दर्शक पनि सँगै फर्कियो । जसको नतिजा पनि शानदार नै आयो । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत पुरुष फुटबलको पहिलो खलेमा नेपाल यू२३ ले भुटान यू२३ लाई ४-० को शानदार स्कोरमा पराजित गर्‍यो ।
विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको रंगशालमाल मंसिर ९ गते पस्दा नै खेलाडी प्रशिक्षक पदाधिकारी सबै उत्साहित थिए । सागकै लागि केही दिन नेपाली खेलाडीले रंगशालमा दिउँसो अनी बेलुका फ्लडलाइड पनि ट्रेनिङ गरेको थियो । त्यसैले खेलाडीहरुको अपेक्षा पनि दर्शकको साथ पाउनेमा थियो ।
साग अन्तर्गत पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई १-० ले स्तब्ध पार्दै शानदार शुरुवात गरेको भुटानमाथी नेपालले झनै शानदार जित हात पार्‍यो । नेपालको लागि यो डबल फाइदा बन्यो । रंगशालमा फेरी खेल्न पाउनु शानदार जित हात पार्न ।
नेपाल यू२३ फुटबल टिम
नेपालले २० वर्षअघि सन् १९९९ मा आठौं सागको फाइनल दशरथ रंगशालामै खेलेको थियो। उक्त फाइनलमा बंगलादेश विरुद्ध पराजित हुँदै रजतमा सिमित भएका खेलाडी बालगोपाल महर्जन अहिले नेपालको प्रशिक्षकको रुपमा छन् । खेलाडीको रुपमा १९९३ मै उनले स्वर्ण जितेका थिए ।अब प्रशिक्षकको रुपमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्यका साथ खेलाडीलाई तयार पारेका छन् र उनको टोलिले पहिलो खेलमै नतिजा पनि दिइहाल्यो। रंगशालमा पुनरामगन उको लागि पनि खेलाडी जस्तै विशेष बन्यो। ‘करिब ५ वर्ष दशरथ रंगशालमा आज सबैको सामु उपस्थित भएको छु। भुटानसंगको खेलपछि एकदमै खुशीयालीको माहोल छ ।’ महर्जनले खेलपछि भने। ‘आजको सफलता पाउनुमा ४ महिनाको लगातार प्रयास र मिहिनेत छ । त्यही अनुसारको प्रदर्शनले भुटानलाई सहजै पराजित गर्न सक्यौँ।’
यस्तै भुटान विरुद्ध खेलको चौथो मिनेटमै गोलको खाता खोलेका कप्तान सुजल श्रेष्ठ पनि एकदमै खुशी देखिन्थे। झन् उनले कप्तान भएपछि पहिलो खेलमै गोल समेत गरे । तर सनियर टिम नभई यो यू२३ अर्थात ओलम्पिक टिमको लागि थियो। सुजलले भुटान विरुद्ध एक होइन दुई गोल गरे। ‘धेरै पछि दशरथ रंगशालमा नेपालले खेल्न पाएको छ। खुशी छौँ।’ खेलपछि सुजलको पिहलो प्रतिक्रिया थियो। सुजलले त दशरथ रंगशाला नेपालको खेल हादा पहिले जस्तै भरिने सोचेका थिए तर त्यो भने अली भएन। ‘सानै देखि हेर्दै आएको रंगशालमा फेरी खेल्न पाउदा एकदमै खुशी छौँ। दर्शक पनि एकदमै उत्साहित थिए। मैले भरिनछ होला सोचेको थिएँ अली भएन। ’ रंगशाला पूरै नभरिएपनि त्यहाँ उपस्थित ८ हजार भन्दा बढी दर्शककोले नेपाली टिमलाई १२औ खेलाडी बनेर साथ दिइरहे। खेलाडीले पनि त्यही जोशमा चार गोल गरे।
प्रशिक्षक महर्जनले खेलाडीले सही निर्देशन अनुसार खेलेको र सफल भएको बताए । भोली पनि अर्को खेल खेल्नुपर्छ र अझै ३ खेल खेल्न बाँकी छ। खेलाडीलाई जुन निर्देशन अनुसार पठाएका थियो त्यही अनुसार खेलेका छन्। आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रदर्शन होस् । महर्जनले भने।
यस्तै कप्तानसुजलले पनि जितनकै लागि खेलेको र जितमा धेरै रमाउनु नपर्ने बताए। हामी जित्नकै लागि खेलेको थियौँ शुरुदेखि नै। चार वर्षदेखि ट्रेनिङ गराएको टिम थियो। भोली नै खेल्नुपर्ने छ। आजको जितले हामी धेरै रमाइराख्नुपर्छ जस्तो छैन। किनकी हाम्रो टारगेट भनेको यो मात्रै होइन अझै चार खेल खेल्नुपर्छ। हामी खुशी छौँ आजको रिजल्टबाट। हाम्रो लक्ष्य भनेको फाइनल पुग्दै स्वर्ण जित्ने हो। आगामी लक्ष्यबारे सुजलले भने।
भुटान विरुद्ध शुरुदेखि नै दबाव दिएर खेल्ने प्रशिक्षक महर्जनको रणनीतिमा नेपाल सफल भयो पनि ।उनले कप्तान सुजललाई विंगलरबाट अट्याकिङमा खेलाएका थिए। आज सबैले खेलको संरचना अनुसार नै खेले। वैक्लपिक खेलाडी पनि सही समयमा परिवर्तन गरेको जस्तो लाग्छ। महर्जनले भने। पहिलो हाफमा हामीले शुरुमै दबाव गरेर दिएर खेल्ने रणनीति थियो र हामी गोल गर्न सफल भयौँ।
सागमा पाँच राष्ट्र मात्र सहभागि भपछि राउण्ड रोविनको आधारमा खेल भइरहेको छ। त्यसैले कुनै टिमले लगातार खेल पनि खेलेको छ। प्रशिक्षक बालगोपालले पनि यसरी खेल्न गाह्रै हुने बताए। माल्दिभ्सले सोमवार र मंगलवार लगातार दुई खेल खेलिसकेको छ । नेपालले पनि लगातार खेल्दैछ र बुधवार श्रीलंकासंग खेल्नेछ। श्रीलंकाले मंगलवार पनि खेलेको थियो। महर्जनले सबै टिमसंग राम्रो प्रदर्शनको आशा राखेका छन्। सबै टिमसंग हामीले राम्रो खेल्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ। भुटान भन्दा अन्य टिम राम्रो देखिन्छ। आजको भन्दा राम्रो खेल्यो भने श्रीलंका विरुद्ध पनि नतिजा आउँछ।
यस्तै ५ टिममध्ये को बलियो छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अपोनेन्ट सबै बलियो नै हुन्छ कुनै सजिलो हुँदैन।’ तर उनले माल्दिभ्स अली बलियो रहेको सुनाए।
अहिलेसम्म भएको चार खेलमा दुई खेलको मात्र स्पष्ट नतिजा आएको छ भने दुई खेल बराबीमा सकिएको थियो। नेपालले पहिलो खेलमै गोलको वर्षा गर्दै चार गोल गरिसकेको छ । अन्य तीन खेलमा गरेर जम्मा तीन गोल भएको छ । यस नतिजाले आगामी खेलमा पनि फाइदा पुग्ने प्रशिक्षक महर्जनको विश्वास छ।
यस्तै यू२३ टिमको नेतृत्व गर्दै खेलेको पहिलो प्रतियोगितामै गोल गर्न पाउ खुशी लागेको सुजलले बताए। गोल गगर्नु भनेको क्लबाट खेल्दा होस् या राष्ट्रबाट सबैभन्दा खुशीको क्षण हुन्छ। आज पनि मैले गोल गरेँ धेरै धेरै खुशी छु भित्रैबाट। सन् २०११ मा राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका सुजलले सिनियर टिमको लागि दुई गोल गरेका छन् । विश्वकप छनोटमा टिमोर लेस्टे विरौध २०११ मा र २०१५ मा सोलिडारीटी कपको फाइनलमा मकाउ विरुद्ध।
विशेष खेलमा गोल गर्ने सुजलले रंगशालमा पुनरागमन गर्दा पनि पहिलो खेलमै गोल गरे। ओलम्पिक टिमको लागि उनको यो पहिलो गोल हो। यस्तै बालगोपाल महर्जनको पनि यू२३ टिममा प्रशिक्षकको रुपमा यो डेब्यु खेल हो।
नेपालका अभिशेक रिजाल बल हेड गर्ने प्रयासमा
सागमा नेपालले अहिलेसम्म जितेको ७१ स्वर्ण
काठमाडौं : १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग काठमाडौंबाट आइतवारबाट शुरु भइसकेको छ। सोमवार मात्रै नेपालले अहिलेसम्म ७ स्वर्ण जितिसकेको छ। २०१६ मा भएको १२औं सस्करणमा ३ मात्र स्वर्ण जितेको नेपालले १३औं संस्करणमा पहिलो दिनै स्वर्णको वर्षा गरिसकेको छ। अहिलेसम्म १२औं संस्करणसम्म खेल्दा नेपालले कूल ७१ स्वर्ण जितेको छ।
१९८४ पहिलो साफ गेम्स, काठमाडौं
१.बैकुण्ठ मानन्धर : एथ्लेटिक्स
२.स्वर्गीय दलबहादुर रानामगर : बक्सिङ
३.स्वर्गीय पुस्कर शाही : बक्सिङ
४.पुरुष फुटबल टिम
१९८५ दोस्रो साफ गेम्स, ढाका
१. बैकुण्ठ मानन्धर : एथ्लेटिक्स
१९८७ तेस्रो साफ गेम्स, कोलकता
२. स्वर्गीय दलबहादुर रानमगर : बक्सिङ
१९८९ चौथो साफ गेम्स, इस्लामावाद
१. चित्रबहादुर गुरुङ : बक्सिङ
१९९१ पाँचौ साफ गेम्स, कोलम्बो
१. अनिता श्रेष्ठ : सुटिङ
२. गीता क्षेत्री, सिजरिन शाह, पुजा थापा र निलम तुलाधर : टेबलटेनिस
१९९३ छैटौँ साफ गेम्स, ढाका
१९९५ सातौं साफ गेम्स, मद्रास
१. टिका बोगटी : एथ्लेटिक्स
२. रमेश बस्नेत : जुडो
३. विरबहादुर राना : जुडो
४. जितबहदुर चौधरी : जुडो
१९९९ आठौं साफ गेम्स, काठमाडौं
१. प्रकाश थापागमर : बक्सिङ
२. रामचन्द्र थापामगर : बक्सिङ
३. रवि महर्जन : कराते
४. दीपक श्रेष्ठ : कराते
५. धोजमान मोक्तान : कराते
६. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ : कराते
७. राजेश श्रेष्ठ : कराते
८. कृष्ण गुरुङ : कराते
९. प्रिति डंगोल : कराते
१०. टिम काता : कराते
११. गंगाराम महर्जन (सिंगल काता) : कराते
१२. निता राई : कराते
१३. निमा पाठक : कराते
१४. जुनु राई : कराते
१५. विनिता चौधरी : कराते
१६. टिम काता (महिला): कराते
१७. रुना प्रधान, नयना शाक्या, रुविना प्रधान, स्तुति सिंह : पौडी
१८. संगिना बैद्य : तेक्वान्दो
१९. रेनुका रानामगर : तेक्वान्दो
२०. सविता राजभण्डारी : तेक्वान्दो
२१. प्रमिला थापा : तेक्वान्दो
२२. बन्दना श्रेष्ठ : तेक्वान्दो
२३. रितु जिमी राई : तेक्वान्दो
२४. किशोर श्रेष्ठ : तेक्वान्दो
२५. अशोककुमार लामा : तेक्वान्दो
२६. कोशिस खड्का : तेक्वान्दो
२७. दीपक विष्ट : तेक्वान्दो
२८. रवि उज्वज थपलिया : तेक्वान्दो
२९. कमल क्षेत्री : तेक्वान्दो
३०. राजकुमार राई : तेक्वान्दो
३१. सीता राई : तेक्वान्दो
२००४ नवौं साफ गेम्स, इस्लामावाद
१. दीपक श्रेष्ठ : कराते
२. संगिना बैद्य : तेक्वान्दो
३. रुपा सयाङदेन : तेक्वान्दो
४. दीपक विष्ट : तेक्वान्दो
५. निर्मल श्रेष्ठ : तेक्वान्दो
६. रेनुका रानामगर : तेक्वान्दो
७. निरञ्जन श्रेष्ठ : तेक्वान्दो
२००६, १०औं साग, कोलम्बो
१. कमलबहादुर अधिकारी : भारोत्तोलन
२. विना लामा खड्का : उसु
३. राजकुमार रसाइली : उसु
४. सुलोचना सिज्वाखा : कराते
५. कुशल श्रेष्ठ : कराते
६. मनिता शाही : तेक्वान्दो
७ दीपक विष्ठ : तेक्वान्दो
राजेन्द्र भण्डारीले २ स्वर्ण जितेपछि पछि डोपिङका कारण खोसिएको)
२०१०, ११औं साग, ढाका
१. दीपक विष्ट : तेक्वान्दो
२. आयशा शाक्य : तेक्वान्दो
३. विनिता महर्जन : उसु
४. आङबाबु लामा : उसु
५. सुनिल लामा : कराते
६. विनोद शाक्य : कराते
७. गंगा अधिकारी : कराते
८. राजेन्द्र भण्डारी : एथ्लेटिक्स
२०१६ ,१२औं साग, गुवहाटी–सिलोङ
१ निमा घर्तिमगर : उसु
२. फुपु ल्हामु खत्री : जुडो
Posted bynepalgovin December 2, 2019 Posted inSportsTags:SAGamesLeaveacomment on सागमा नेपालले अहिलेसम्म जितेको ७१ स्वर्ण
१३औं साग : महिला भलिबलमा इतिहास रच्दै नेपाल फाइनलमा
काठाडौं : १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको औपचारिक उद्घाटन आइतवार राष्ट्रपतिबाट हुँदैछ। तर त्यो अघि नै नेपालले एउटा पदक पक्का गरिसकेको छ। नेपालको महिला भलिबल टोलील उद्घाटन अघि कमतीमा रजत पदक पक्का गरेको छ त्यो पनि ऐतिहासिक उपलब्धिसहित।
नेपाल साग इतिहासमा पहिलो पटक महिला भलिबलमा फाइनल पुगेको हो। १३औं साग अन्तर्गत म्सिर ११ बाट शुरु भएको भलिबलतर्फ नेपालको महिला टोलीले शनिवार श्रीलंकालाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा नेपालले श्रीलंकालाई २५–१४, २५–१८,२५–२१ को सेटमा पराजित गरेको हो। फाइद्दल पुग्दा नै इतिहास बनाएको नेपाली महिला भलिबल टोलीले अब स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ। सागमा नेपालले यसअघि तीन पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा कास्य मात्र जितेको थियो। १९९९ मा काठमाडौंमै भएको आठौं, २००६ को १०औं र २०१६ को ११औं सागमा महिला भलिबल टिमले तेस्रो हुँदै कास्य जितेको थियो। यस पटक नेपालले एक स्टेप सुधार गरिसकेको छ।
अब नेपालले स्वर्णका लागि मंगलवार भारतसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले समूह चरणमा भारतसंग खेल्दा ३-० को हार बेहोरेको थियो। अब त्यसको बदला लिँदै स्वर्ण जित्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ।
घरेलु दर्शकको साथ पाएको नेपाली टोली घरेलु कोर्टमा श्रीलकालाई पराजित गरेपछि निकै उत्साहित बनेको छ।
श्रीलंकालाई सोझो सेटमा हराएपछि प्रशिक्षक जगदिश भट्ट र कप्तान अरुणा शाहीले पनि खुशी लुकाउन सकेनन्। दुवैले यसलाई मिहिनेतको फल भने। हामीले ४ महिना देखि यसैका लागि भनेर मिहिनेत गरिरहेका थियौँ। त्यसैको फल पाएका छौँ। कप्तान अरुणाले भने। यस्तै प्रशिक्षक भट्टले पनि ४ महिनाको मिहिनेत देखिएको बताए।
श्रीलंकाले यसअघिका खेलमा भन्दा राम्रो खेलेपनि नेपालले त्यो भनदा राम्रो खेलेर जित हात पारेको दुवैले बताए।
अब नेपालले फाइनलमा भारतसंग बिना दबाव खेल्ने प्रशिक्षक भट्टले बताए। हामीले पहिल्यै देखि स्वर्णका लागि खेल्ने भन्दै आएका थियौँ। ऐतिहासिक रजत पदक पक्का गरिसकेका छौँ। भट्टले भने। अब हामी फाइनलमा बिना दबाब भारतसंग खेल्नेछौँ र कमीकमजोरी सुधार गर्दै स्वर्णका लागि खेल्नेछौँ।
यस्तै कप्तान अरुणाले श्रीलंकासंग खेल्दा दर्शकको साथी पाएकोले मोटिभेट भएर खेलेको र सहज भएको बताइन्। अब फाइनल खेल्न उत्साहित रहेको उनले सनाइन्। यो जितले हाम्रो स्वर्ण पदकको आशा बढेको छ। रजत पदक पक्का भइसकेको छ। अब हामी भारतसंग दबाब बिना खेल्छौँ र स्वर्णका लागि खेल्छौं।
प्रशिक्षक भट्टले अहिले नेपाली टिममा युवा खेलाडीहरु धेरै रहेको र उनीहरुले एकसाथ केही समय खेल्न पाउने हो भने नेपाल पनि कुनै दिन एसियाको टप टिम बन्ने बताए।
नेपालले बंगलादेशमा कात्तिक २८ मा सम्पन्न एभिसी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन वुमन्स भलिबलमा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। त्यो ने नपालले अहिलेसम्म जितेको पहिलो उपाधि थियो। त्यसअघि सन् २०१४ मा घरेलु कोर्टमै ऐउको पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले दोस्रो हादै रजत जितेको थियो। त्यतिखेर राउण्ड रोविन लिगमा भएको च्याम्पियनसिपमा नेपालले श्रीलंकालाई पराजित गरेको थियो भने भारतसंग हार बेहोरेको थियो।
Posted bynepalgovin November 30, 2019 Posted inVolleyballLeaveacomment on १३औं साग : महिला भलिबलमा इतिहास रच्दै नेपाल फाइनलमा
सागको तयारी लगभग पूरा, दशरथ रंगशाला शुक्रवार तयार हुने
मंसिर १५ गतेदेखि हुने १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोको जानकारी दिए ।
सदस्य–सचिव सिलवालले दशरथ रंगशालामा बाँकी रहेको काम शुक्रबारसम्म सकिनेमा ढुक्क रहन आग्रह पनि गरे । ‘म तपाईँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, शुक्रबार रातिसम्ममा दशरथ रंगशाला तयार हुनेछ । अब रङ्गशाला परिसर र खेल स्थलका सरसफाइको काम मात्र निरन्तर चल्नेछ।’ सदस्य–सचिव सिलवालले भने ।
सदस्यसचिव सिलवालले पोखरा रङगशालाको दर्शक क्षमता पहिले १० हजारको मात्र गर्ने भनिएकोमा अब १३ हजारमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । पोखरा रङगशालाको मैदान पनि पूर्ण रुपमा तयार छ । ट्रयाक एन्ड फिल्डको काम पनि सकिसकेको छ । जहाँ खेलाडीहरुले अभ्यास पनि सुरु गरिसके– उनले भने ।
प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले सागमा सुरक्षा व्यवस्था कडा र चुस्त हुनेमा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे । साग सुरक्षा कमिटीका संयोजक खनालले भने– ‘सागमा अवाञ्छनीय गतिविधि हुन दिने छैनौँ । सागलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्न भिभिआइपी, भिआईपी, अतिथि, खेलाडी, पदाधिकारी, रेफ्री, मिडिया र दर्शकको सुरक्षा व्यवस्थामा रत्तिभर कमी हुने छैन । विदेशी पाहुनाका लागि सुरक्षा अझ चुस्त गरिनेछ । सम्भावित हुलदङ्गाका लागि होटलदेखि, यातायात व्यवस्थापन र खेलकुदस्थलमा समेत विशेष किसिमको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । पाहुनाहरुलाई विमानास्थलदेखि होटलसम्म, खेल्ने मैदानदेखि उनीहरुले भ्रमण गर्ने स्थलसम्म कडा सुरक्षा हुनेछ । आवश्यकता परेमा खेलाडीहरुलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्थसहित खेल स्थलसम्म पनि पुर्याइनेछ । सुरक्षा विषयमा सावधानी र सतर्कता अपाउन आवश्यक सबै सुरक्षा उपायहरुमा अपनाइनेछ । सम्भावित खतरालाई निस्तेज पार्ने व्यवस्था भइसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सुरक्षा निगरानी उच्च बनाइएको छ ।
प्रहरी महानिरिक्षक खनालले विशेष परिस्थितिका लागि थप सुरक्षाकर्मीको टिम तयार गरिने जानकारी दिए । यसैगरी सदस्यसचिव सिलवालले दर्शहरुलाई रङ्गशालामा रहेका सिटमा क्षति नपुर्याउन आग्रह गरे । रङ्गशालामा दर्शकहरुको गतिविधिलाई निगरानी गर्न सिसिटिभी जडान गरिएको त छ नै इ टिकटबाट पनि दर्शक पहिचान गरी कारवाही गरिनेछ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन ः
सागमा काठमाडौँका सडकमा हुने जामलाई व्यवस्थापन गर्न चुस्त, दुरुस्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइने भएको छ । सागको समयमा ठूला मालवाहक सवारी साधन रिङरोडभित्र प्रवेश नगर्न अनुरोध गरिनेछ । दशरथ रङ्गशाला वरिपरिका सवारी मार्गमा वानवे लागू गरिनेछ । उद्घाटन दिन रिङरोडभित्र विजोड र समापनमा जोड नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन पाउने नियम लागू गरिनेछ । दर्शकका लागि पार्किङ स्थल टुँडिखेलमा तोकिएको छ । सो स्थानमा पार्किङ गर्न काठमाडौँ मल अगाडिको ढोका प्रयोग हुनेछ । रङ्गशाला भित्र भिभिआइपिको पार्किङ हुनेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सागमा हुने खेलका लागि इ सेवासँग सहकार्य गरेको छ । इ सेवाले अहिले फुटबल, बास्केटल र भलिबलका टिकट अनलाइनमार्फत् विक्री सुरु गरिरकेको छ । सागमा खेल हेर्न चाहने व्यक्तिले सागडटइसेवाडटकमडटएनपीमा गएर टिकट खरिद गर्न सक्नेछ । इसेवाका प्रतिनिधि रोशन लामिछानले दशरथ रंगशलामा हुने समूह चरणका फुटबल खेल हेर्न साधारण पारापिटमा पाँच सय र भिआइपी पारािपटमा एक हजार रुयिाँको टिकट तोकिएको जानकारी दिए । यसैगरी क्रिकेटको टिकट विक्रीको अधिकार भने नेपालयसँग छ । क्रिकेटमा नेपालको खेल हुँदा पाँच सय र अन्य देशबीच खेल हुँदा दुई सय रुपियाँ टिकट मूल्य तोकिएको छ ।
Posted bynepalgovin November 28, 2019 November 28, 2019 Posted inSportsTags:SAG, SAGamesLeaveacomment on सागको तयारी लगभग पूरा, दशरथ रंगशाला शुक्रवार तयार हुने
हुनत यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक मात्र रंगशाला हो। त्यसो भए यहाँ नियमित फुटबल हुनुपर्ने। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि फुटबल हुनुपर्ने। तर थिएन, यहाँ विगत ४ वर्ष ६ महिना यता कुनै प्रकारको फुटबल खेल भएको थिएन।
कुन समय झाडीमै परिणत भएको थियो यो ठाउँ।
यहाँ चर्चा गर्न लागिएको स्थान हो त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रगशाला। जुन नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला हो। अनी किन यहाँ चार वर्ष केही भएन त। २०७१ सालमा रंगशाला मर्मत गर्न शुरु गरिएको थियो। नयाँ पिल्लर राखेर साधारण प्यारापिटमा रेट्रोफिटिङ, छानो राख्ने अनी सिन्थेटिक ट्रयाक ओछ्याउने काम शुरु भएको थियो। यो काम हुँदै गर्दा २०७२ बैशाखमा भुकम्प गयो। अनी रंगशाला थप कमजोर बन्यो। केही बनाइएको संरचना समेत बिग्रियो।
यसपछि रंगशाल पुरानै रंगशाला रहेन। चार वर्षसम्म न त त्यहाँ फुटबल भयो न फुटबल खेलाडी मैदान पुगे। न नेपालको लिग भयो न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल भयो। बैशाख १२ गते भुकम्प गएकै दिन त्यहाँ साफ यू१५ गर्ल्स फुटबलको फाइनल तय थियो तर हुन पाएन। त्यसअघि सिनियर स्तरमा २०७१ चैतमा विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपाल र भारतबीचको खेल अन्तिम पटक त्यहाँ भएको थियो।
यसबीचमा नेपाली फुटबलले धेरै गुमायो। दर्शक गुमायो। समर्थक गुमायो। अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता गुमायो। अनी घरेलु फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग समेत प्रभावित बन्यो।
आर्थिक रुपमा पनि घाटा भयो। केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरु नेपालमा आयोजना भएपनि दर्शक कम हुने एन्फा कम्प्लेक्स र एपीएफ मैदानमै समिति भयो। जहाँ थोरै मात्र दर्शकको क्षमता थियो। दशरथ रंगशालाको जस्तो माहोल बन्दैनथ्यो।
२०७६ साल मंसिर ९ गते सोमवार
दशरथ रंगशालाको अवस्था केही फरक देखियो।
देश अहिले दक्षिण एसियाली खेलकुद मेलाको प्रतिक्षामा छ। १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग मंसिर १५ देखि नेपालमा शुरु हुँदैछ र अहिले रंगशाला लगायत विभिन्न स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको तयारी भइहेको छ।
रंगशालमा सागको लागि तयार पार्ने काम जारी छ। मंसिर १५ मा यही उद्घाटन समारोह हुँदैछ। यस्तै फुटबल एथ्लेटिक्स खेल पनि हुँदैछ। त्यसैका लागि भिआइपी प्यारापिटमा छानो राख्ने काम भइरहेको छ। सोमवार भने रंगशालको मैदान फरक दृश्य देखियो। फुटबल खेलाडीहरु साढे चारवर्षपछि रंगशाला छिरेका थिए। उनीहरु रंगशाल हेर्दै उत्सुक भइरहेका थिए। साग खेल्ने टिम यू२३ भएकोले केही खेलाडीको लागि म्भवत यो पहिलो इन्ट्री समेत थियो होला। त्यसैले पुराना नयाँ खेलाडी उत्साहित थिए।
२ बजे रंगशाला पुगेका उनीहरुलाई पनि त्यहाँको माहोल पक्कै नौलो थियो। करिब २ घण्टा नै ट्रेनिङ गरेपछि उनीहरु थप उत्साहित बने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लामो समयपछि ट्रेनिङ गर्न पाउँदाको उत्साह उनीहरुङ्गा प्रष्टै देखिन्थ्यो। त्यति मात्र नभएर फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा देखि पदाधिकारीहरु पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थिए।
प्रशिक्षण शुरु हुनुअघि नै प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र कप्तान सुजल श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसंग त्यो उत्साह साटे। छुटेका सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण पछि पनि यी दुईले आफ्नो अनुभव सुनाए।
साढे चार वर्षपछि दशथ रंगशालमा प्रवेश गर्दा निकै खुशी लागेको छ। सबै जना उत्साहित भएका छौँ। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने। कतै विदेशकै रंगशालमा छिरेको जस्तो भइरहेको छ भन्ने चर्चा पनि मैले सुने।
यस्तै कप्तान सुजलले पनि ढिल भएपनि रगशाला तयार हुँदै गर्दा खुशी व्यक्त गरे। साढे चार वर्षपछि दशरथ रंगशालमा फर्किन पाएका छौँ। गेटबाट छिर्ने बित्तिकै एकदमै खुशी लागिरहेको थियो। सबै जना उत्साहित थिए।
नेपालले यही रंगशालमा मंसिर १५-२४ मा हुने सागको फुटबल खेल्दैछ। त्यसको लागि पनि खेलाडीहरु उत्साहित छन्। घरेलु मैदानमा घरेलु मर्थकको अगाडि खेल्न सबैजना तयार छन्। के नयाँ खेलाडीलाई त्यसमा खेल्न सहज होला त जसले थोरै दर्शकका अगाडि मा खेलेका छन्। कुनै दबाब हादैन। सुजल भन्छन्। दर्शक त झन् १२औं खेलाडी हो। त्यसमा खेल्न हामी झन् उत्साहित छौँ।
सन् २०१६ मा भारतमा भएको १२औं सागमा स्वर्ण जितेको नेपाललाई यस पटक घरमै स्वर्ण जित्ने अवसर पनि छ। यसका लागि टिम तयार रहेको प्रशिक्षक र कप्तानको भनाई छ। फुटबललाई अन्य खेल भन्दा धेरैले फलो गर्ने भएको यसको छुट्टै स्थान रहेको कप्तान सुजलको बुझाई थियो। उनले सबैको अपेक्षा स्वर्ण नै रहेको र त्यसैका लागि खेल्ने बताए। यस्तै प्रशिक्षक महर्जनले २० वर्षपछि नेपालले आफ्नै मैदानमा साग फुटबल खेल्न लागेको टार्गेट गोल्ड नै भएको सुनाए। सन् १९९९ मा नेपालमा आठौं साग आयोजना हुँदा नेपाल फाइनलमा बंगलादेशस्ग पराजित भएको थियो र त्यस टिममा बालगोपाल महर्जन पनि थिए। सन् १९९३ मा नेपालले सागमा स्वर्ण जितदा सदसय रहेका बालगोपाल यस पटक प्रशिक्षणको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। बालगोपलासंग खेलाडीको रुपमा स्वर्ण जितेका राजु काजी शाक्यले १२औं सागमा प्रशिक्षक बनेर पनि नेपाली टिमलाई स्वर्ण जिताए। यस पटक त्यो जिम्मेवारी बालगोपालको काँधमा छ। के त्यो पूरा गर्न उनको टोली तयार छ त! त्यसका लागि अबको दुई साता पर्खनुपर्नेछ।
भुटानमा नेपाल र कुवेतको खेल हेर्ने दर्शक, फोटो
थिम्पु, भुटान : विश्वकप छनोट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलमा नेपाल १-० ले पारजित भयो। दशरथ रंगशालमा खेल्नुपर्ने होम म्याच नेपालले भुटानको थिम्पुस्थित चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा मंसिर ३ मा खेलेको हो। जसमा नेपालले अंक जोड्ने लक्ष्य बनाएपनि सफल भएन।
घरेलु मैदान नभएपनि भुटानका दर्शकहरु नेपालको खेल हेर्न भने आएका थिए। कुवेतको झण्ड हातमा भएपनि उनीहरु नेपालको समर्थन गरिरहेका थिए।
Posted bynepalgovin November 20, 2019 November 20, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on भुटानमा नेपाल र कुवेतको खेल हेर्ने दर्शक, फोटो
थिम्पु, भुटान : खेल जहाँ भएपनि कुवेतको लक्ष्य जित्ने नै थियो। जसरी हुन्छ ३ अंक जोड्ने। नेपालको लक्ष्य सकेसम्म अंक जोड्ने मात्र थियो। खेल जित्न नसकेपनि कुवेतलाई बराबरीमा रोक्दै १ अंक जोड्ने नेपालको योजना थियो। १ अंक मात्र जोड्न सकेपनि त्यो नेपालको लागि उपलब्धी हुनेथियो।
तर फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनोट अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल कुवेतसंग १-० ले पराजित भयो। नेपाल हार्नुको दुई स्पष्ट कारण छन्। एउटा कुवेतको गोल हुनु अर्को नेपालले गोल गर्ने अवसर चुकाउनु।
थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ स्टेडियममा नेपालको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। तर खेलमा भने केही सुधारियोको प्रदर्शन देखियो।
समूह बी अन्तर्गतको यस खेलमा खासमा नेपालकै दशरथ रंगशालमा हुनुपर्ने थियो। तर रंगशाल पूर्ण रुपमा तयार नभएकोले नेपालले आफ्नो होम म्याच नै सार्नुपर्‍यो र भुटानमा त्यो खेल सम्पन्न भयो।
नेपालको यो पहिलो होम म्याच थियो। र न्यूट्रल भेन्युमै खेल्नुपर्‍यो। घरेलु दर्शकको अगाडि घरेलु मैदानमा खेल्दै अंक जोड्ने सपना खेलाडीको रहेपनि कम्तीमा यो खेलको लागि सम्भव हुन सकेन।
भुटानमै पनि नेपालका केही खेलाडीले खेलिसकेको, नेपालको फुटबल थाहा पाएको दर्शक थिए। उनीहरुले नेपाललाई सपोर्ट पनि गरे। तर नेपालले खेल जित्न सकेन। भुटानी समर्थकको मन चाँही जित्यो होला सायद।
खेलअघि कुवेतले यहाँका दर्शकलाई उसैको देशको झण्डा बाँडेको थियो। सायद समर्थन गरिदिन आग्रह गर्दै। उनीहरुले स्टेडियममा कुवेतको झण्डा पनि ल्याए। तर समर्गन भने नेपालकै लागि थियो।
खेलमा नेपाल पछि परेपछि पनि उनीहरुले वि वान नेपाल गोल नारा लगाएका थिए। खेल सकिएपछि नेपाली खेलाडीले पनि उनीहरुको समर्थनलाई अप्रिसिएट गर्दै सम्मान व्यक्त गरेका थिए। चाङ्लिमिथाङमा उपस्थित ४ हजार भन्दा बढी दर्शकमध्ये धेरैको समर्थन नपाललाई नै थियो। तर नेपालले गोल गरेर उनीहरुलाई उपहार दिन भने सकेन।
सायद दशरथ रंगशालामै खेल्न पाएको भए नेपालले १२औं खेलाडीको रुपमा लिइने घरेलु दर्शकको साथ पाउने थियो र जित्ने थियो। यद्यपी भुटानमै आएर पनि नेपालको खेल भने सुधारियो।
भुटान आउनुअघि टिमका चार खेलाडी बर्खास्तीमा परेका थिए। २० खेलाडीसहित नेपाल भुटान आएको थियो। ४ खेलाडी बाहिरिँदा सुभास गुरुङ भाग्यमानी बने। घरेलु फुटबलमा संकटाबाट खेल्ने सुवासले भुटानमा खेल्दै राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरे। उनी ८९औं मिनेटमा तेज तामाङको स्थानमा वैक्लपिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए।
नेपालका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पनि खेलपछि नेपाली टोलीले राम्रो खेलेको प्रतिक्रिया दिए। खेलाडीले राम्रो खेले। सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। तर हामीले पाएको अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौँ।
श्रेष्ठले ४ खेलाडी नहुँदा र भुटानमा खेल्नुपर्दा पनि नेपाली टिमले मोटिभेट भएर खेलेको बताए। गोर्खाली छवी मैदानमा देखिएको उनको भनाई थियो।
होम म्याच भुटानमा आएर खेलेको नेपालले कुवेतलाई रोक्ने अंक खोस्ने जस्ता रणनीति बनाएको थियो। किनकी कुवेतलाई चिसो हावापानी भएको मौसममा खेल्न गाह्रो हुने नेपालले बुझेको थियो। कुवेत पनि यसमा सजग थियो। नेपाललाई कमजोर नआँक्ने भन्दै प्रिम्याच कन्फ्रेन्समा उसका प्रशिक्षक थामेर एनाडले भनेका थिए। तर लक्ष्य ३ अंक नै राखेका थिए। त्यसमा सफल भएको एनाडको भनाई थियो। हामी जुन चिजका लागि आएका थियौँ। जे आवश्यक थियो। त्यो पायौँ। ३ अंक लिन सफल भयौँ।
समूहको पहिलो खेलमै कुवेतसंग ७-० ले हारेकोले पनि नेपालको नतिजा यस पटक कस्तो हुने हो के हुने हो भन्ने सबैलाई चासोको विषय थियो। जित्न नसकेपनि धेरै गोल नखाओस् भन्ने समर्थकको चाहना थियो। त्यसैले पनि १-० को हारलाई धेरैले सुधारिएको प्रदर्शन मानेका हुन्।
चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा कुवेतले गोल गरेपनि अवसर नेपालले धेरै पाएको थियो। सदुपयोग हुन सकेन। खेलको २२औं मिनेटमा अभिषेक रिजाल गोल गर्नबाट चुके। उनले सुजल श्रेष्ठको पामा क्लोज रेन्जबाट गरेको प्रहार पोष्टमाथीबाट बाहिरियो। उक्त प्रहार गोल भएको भए सायद खेलको माहोल अर्कै हुने थियो। तर कुवेती कप्तान बादर अल मोतावाले मौका गुमाएनन्। २८औं मिनेटमा डिएरिया बाहिरबाट गोल गर्दै अग्रता दिलाए। नेपाललाई बराबरी गोल फर्काउन अवसर पनि थियो। तर सकेन। ४०औं मिनेटमा रोहित चन्दले विक्रम लामाको पासमा गरेको प्रहार कुवेती गोलकिपरले बचाए।
त्यसपछि पनि नेपालले राम्रो खेल प्रदर्शन गरेपनि गोल गर्न भने सकेन।
छनोटमा यो नेपालको चौथो हार हो। यसअघि नेपाल कुवेत, अष्ट्रेलिया र जोर्डनसंग पराजित भइसकेको छ।
कुवेतसंग ७-० ले पारजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने कमब्याक गर्दै चाइनिज ताईपेईलाई २-० ले हराएको थियो। त्यसपछि अष्ट्रेलियासंग ५-० र जोर्डनसंग ३-० ले पराजित भयो।
नेपाल ५ खेलबाट ३ अंकसहित चौथो स्थानमा छ। समान खेलबाट १० अंक जोड्दै कुवेत दोस्रो स्थानमा छ।
नेपालले अब बाँकी तीन होम म्याच दशरथ रंगशालामै खेल्नेछ। जसमा अष्ट्रेलिया, जोर्डन र ताइपेईलाई नेपालले दशरथ रंगशालमा आथित्य गर्नेछ।
थिम्पु/भुटान : नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिने दशरथ रंगशाला पूर्ण रुपमा फुटबल खेलाउन लायक भएको भए अहिले म काठमाडौंमै बसेर यो ब्लग लेखिरहेको हुन्थे, सायद।
तर २०७२ सालको विशानकारी भूकम्पपछि चार वर्षसम्म पूर्निर्माणमै सिमित भएको रैगशालाको काम अझै पनि सकिएको छैन। मंसिर तेस्रो साता त्यही दशरथ रंगशालमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकद (साग) उद्घाटन र समापन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै साग अन्तर्गत फुटबल खेल पनि त्यही हुने तय छ। तर मंसिर ३ को लागि दशरथ रंगशालमा कुवेत विरुद्ध तय भएको विश्वकप छनोट अन्तर्गतको होम म्याच भने त्यहाँ हुन असम्भव भयो। र अहिले नेपालले आफ्नै होम ग्राउण्डमा खेल्ने म्याच भुटानको थिम्पुमा खेल्दैछ।
दशरथ रंगशालमा पूनर्निर्माणको काम नसिकएकोले र खेलाउन लायक नभएको भन्दै एएफसीले काठमाडौंमा खेल नहुने फैसला गर्‍यो। त्यसपछि एन्फाले भुटानमा खेलाउने प्रस्ताव गर्‍यो। यसमा कुवेतले आनाकानी समेत गर्‍यो। धेरै लबिङ गर्‍यो। तर एन्फाले पनि विभिन्न प्रयास मार्फत कुवेत विरुद्धको खेल जसरी पनि भुटानमै खेलाउने निर्णय गरेरै छाड्यो।
भुटान आउने टोलीलाई बिदाई गर्ने बेला एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले भनेका थिए। ‘हाम्रो लागि यो नौलो अनुभव हो आफ्नो होम म्याच भुटानमा खेल्नुपरेको छ।’ यसले पनि प्रष्ट पार्छ नेपाली खेलाडी र फुटबल समर्थकलाई यसले पक्कै न्याय गरेको छैन।
सन् २०२२ मा कतारमा हुने फिफा विश्वकप र सन् २०२३ मा चीद्दमा एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनोटको रुपमा रहेको एसियाको दोस्रो चरणको छनोटको समूह बी मा नेपालले चार वटा अवे म्याच खेलिसकेको छ। अब चार होम म्याच काठमाडौंमै खेलाउन प्रयास भइरहेको थियो। तर पहिलो होम म्याच नहुने भयो।
जुन खेल नेपालले मंसिर ३ मा भुटानको थिम्पुस्थित चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा खेल्दैछ। खेल दिउँसो ३ बजे (नेपाली समय पौने २ बजे) शुरु हुनेछ।
मंसिर २ मा भएको प्रिम्याच कन्फ्रेन्समा नेपालका प्रशिक्षक र कप्तानले कुवेत विरुद्धको खेल महत्वपूर्ण भएको र अक जोड्नकै लागि खेल्ने बताए। कति अंक जोड्ने भने भनेनन्।
त्यो केही पुरानो भएपनि नेपाललाई यस पटक अर्को नयाँ समस्याले नि सतायो। कुवेत आउनु अघिल्लो रात टोलीमा रहेका ४ खेलाडी क्लबमा गएर नियम तोडेपछि एन्फाले चार खेलाडीलाई बर्खास्त गर्दै टिमलाई भुटान पठाएको हो। विमल घर्तिमगर, अन्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी र सन्तोष तामाङ भुटान आउने अघिल्लो दिन होटलबाट बाहिर निसक्का थिए। भोलीपल्टको ३० कात्तिकमा बिदाई कार्यक्रममा आउँदा उनीहरुबाट मादक पदार्थको दुर्गन्ध आएको भेटिएको थियो। त्यसपछि एन्फा पदाधिकारी, व्यवस्थापन र प्रशिक्षकको छलफलपछि चार खेलाडीलाई काठमाडौंमा छाड्दै नेपाली टोली भुटान आएको हो। त्यसपछि सुभास गुरुङलाई टिममा राख्दै २० सदस्यीय टोली भुटान आएको हो।
प्रशिक्षक कलिनले यहाँ उपलब्ध भएका खेलाडीहरुमा केन्द्रित रहेर नै भोलीको खेल खेल्ने बताए।
मैदान परिवर्तन हुनु, भुटान आउनुअघि चार खेलाडीले अनुशासन तोड्नु अनी थिम्पुमा नेपाली दर्शक बिना नै खेल्नु नेपाली टोलीका लागि पक्कै सजिलो भने हुने छैन। तर भुटानमा केही खेलाडीले खेलिसकेको, नेपालको जस्तै एस्टो टर्फमा खेलिसकेको र कुवेतलाई भुटानको मौसममा घुलमिल हुन समय लागेकोले नेपालले केही एड्भान्डेज पक्कै पाएको छ। अब यसलाई सदुपयोग गर्दै नेपालले चाङ्लिमिथाङमा कुवेत विरुद्ध खेल्नु पर्छ।
अष्ट्रलिया : १२
चाइनिज ताईपेई : ०
१३औं सागको काउन्ट डाउन सुरु , ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य
नेपालमै आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को काउन्ट डाउन सुरु गरिएको छ। कात्आतिक ३० मा सागको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) एवं १३ औं साग आयोजक समितिका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले यस बारे जानकारी गराए। सोही अवसरमा सागको प्रोमो र आधिकारिक वेवसाइट पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सागको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी http://www.13sagnepal.com मा गएर हेर्न सकिनेछ।
राखेप सदस्य–सचिव सिलवालले १३ औं सागमा ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य रहेको बताए । यसअघि १९९९ मा नेपालमै भएको आठौं सागमा नेपालले ३१ स्वर्ण जित्दै दोश्रो स्थान हात पारेको थियो।
सोही अवसरमा सदस्य–सचिव सिलवालले साग खेल सारा नेपालीहरुको गौरवको विषय रहेको बताउदै यसलाई सफल पार्न सबै पक्षसंग आव्हान गरे। उनले भने– ‘साग गेम्स एउटा प्रतियोगिता मात्र नभएर नेपाललाई विश्वमा चिनाउने माध्यम हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । त्यसैले सबै पक्ष मिलेर सागलाई सफल पारौं।’
दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नोभेम्बर २० तारिखसम्म खेलाडीको नाम दर्ता गर्ने तिथि रहेकाले त्यसपछि मात्र खेलाडीहरुको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुने बताए । उनले उत्साहजनक रुपमा सबै राष्ट्रले सहभागिता जनाएको पनि बताए । उनले प्याराग्लाइडिङ खेल सागमा सहभागी हुने सम्भावना अझै रहेको पनि बताए ।
सागमा २७ खेल (बिच भलिबल र थ्री अन थ्री बास्केटबल) समेत गरि सागमा कुल २९ खेल समावेश गरिएको छ ।
२० बर्ष अगाडी जम्मा १२ खेल समावेश गरि आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना भएको थियो । अहिले दोब्बर भन्दा बढी खेल समावेश भएकोले ब्यवस्थापन पनि सोही अनुरुप दोब्बर भएको छ।
सात देशका कुल ३ हजार बढी खेलाडी र अफिसियल गरि सागमा ५ हजार बिदेशी पाहुनालाई हामी स्वागत गर्दैछौ । काठमाडौं सहित पोखरा र जनकपुरमा खेलको आयोजना हुनेछ । काठमाडौंमा २१, पोखरामा ९ र जनकपुरमा १ खेलको आयोजना हुनेछ । (फुटबल, भलिबल र क्रिकेटका खेलहरु पोखरा र काठमाडौं दुवै स्थानमा हुनेछ ।) प्रतियोगितामा कुल ३ सय २४ स्वर्ण, ३ सय २४ रजत र ४ सय ८७ कास्य गरि कुल १ हजार १ सय ३५ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
विगतको दाँजोमा सागमा सहभागी खेलाडीलाई झण्डै दोब्बर भत्ताको ब्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट १३औं साग आयोजनाको निम्ति करिब साढे ४ अर्व रुपैयाको बजेट निकासा भएको छ । जसमा पुर्वाधार निर्माणको निम्ति १ अर्व ६२ करोड तथा प्रतियोगिता आयोजनाको निम्ति ३ अर्व ६५ करोड बजेट रहेको छ । आवश्यक थप बजेटको निम्ति सरकारले प्रतिबद्वता व्यक्त गरेको पनि बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनपछि त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमा सागको प्रोमोको पनि उद्घाटन गरिएको थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना र सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले रिबिन काटेपछि डिस्प्लेमा प्रोमो प्रशारण भएको थियो ।
Posted bynepalgovin November 17, 2019 Posted inSportsLeaveacomment on १३औं सागको काउन्ट डाउन सुरु , ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य